Wafti ka socda Qaramada Midoobay oo booqday Baydhabo. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Wafti ka socda Qaramada Midoobay oo booqday Baydhabo.
November 13, 2018 - By: Mohamud Nadif
Cabdiqaadir Shariif Sheekhunaa ku simaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo kusoo dhaweeyay wafti ka socda Qaramada Midoobay oo uu hoggaaminayay Kuxigeenka Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Rai Zanenga.
Safarka Waftigaan ayaa daaranaa sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka Koofur Galbeed soomaaliya oo la rajaynayo in ay dhawaan dhacdo, wararka laga helayo Baydhabo ayaa sheegaya in ku simaha madaxweynaha iyo waftigu ay ka wada hadleen halka ay marayso qabanqaabada doorashada, Cabdiqaadir Shariif ayaa u sheegay waftiga in ay ku guda jiraan soo xulista gudigga doorashooyinka maadaama ay is casileen xubnihii hore.
17 bishaan November ayay ku astaysneed doorashada Koonfur Galbeed balse muran hareeyay hanaanka doorashada ayaa sababay in shaqooyin badan oo la qaban lahaa aysan suurta gelin, khilaafaadkaas ayaa sababay in gudigii doorashada is casilaan sidoona kale aakhirkii uu xilkii madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo tantankii doorashadaba uu ka tanaasulo Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, warar ayaa sheegay in macquul ay tahay in dib loo dhigo doorashada.